रावल राष्ट्रवाद « Post Khabar
Published on: 12 May, 2020 7:48 am
१ बिमस्टेक राष्ट्रहरुको नाममा भारतले बनाउन चाहेको सैनिक गठबन्धनमा नेपालले सेना पठायो भनेर भ्रम सिर्जना गर्ने; जवकि नेपालले त्यस्तो निर्णय कहि कतै गरेकै थिएन, सेना पठाएकै थिएन । रावलले सरकारसंग बुझ्नु पहिले पत्रपत्रिका र बजार हल्लाका काल्पनिक बिषयमा गफ गरेर राष्ट्रबादको ढोल बजाए ।
२. एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको बिद्रुपिकरण : एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको कुनै धार्मिक एजेन्डा थिएन । त्यहा कट्टरबादी हिन्दु भनिने भारत बिजेपी सरकारका उच्च अधिकारी देखि बुद्ध धर्म मान्ने मुलुकहरुका सरकारहरुका उच्च अधिकारी लगायत ५०० बढीको उपस्थिति थियो । त्यस्तो कार्यक्रममा नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीहरुले त्यस अघि पनि भाग लिएका थिए । त्यस अघि झन्डै आधा दर्जन प्रमहरुले भाग लिदा ५ पटक मन्त्री भएका रावलले कहिले प्रश्न उठाएनन। त्यही सम्मेलनमा ओलीले भाग लिदा धार्मिक कार्यक्रममा सरकार किन भाग लिएको भनेर चर्को कुरा गरे । रावल तिनै माधव नेपाल गुटका नेता हुन् जसले यस सम्मेलनमा सरकारले सहभागी हुनु पर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीलाइ कन्भिन्स गरेका थिए, नेपाल त्यस सस्थाको सदस्य समेत हुन । रावल माधव नेपालले किन त्यसो गरे भनेर प्रश्न गर्दैनन, उनी ओली सराप्छन । कारण बुझे काफि हुन्छ ।
३. एमसिसि : नेपालले २०११ देखि प्रयास गरेको एमसिसि फन्ड २०१७ मा आएपछी सफल भयो । रावल आफै मन्त्री भएको सरकारले समेत यो फन्ड लिन प्रयास गरेको थियो । २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसिसि फन्ड २०१९ को अन्ततिर जव रावलले पार्टी र सरकारमा आफुले चाहेको भुमिका पाएनन, अनि बम्किन थाले । उनी अझै भ्रम फैलाउदैछन – आयोजनाले ओगट्ने जग्गामा अमेरिकाको अधिकार हुने, अमेरिकी सेना आएर नेपालमा बुट बजार्ने, नेपालको कानुन नटेर्ने, सैनिक गठबन्धन गर्न खोज्ने जस्ता सफेद झुट र हुँदै नभएका कुरा चर्को रुपमा फैलाएर नक्कली राष्ट्रबादी हुन खोजेका छन । एमसिसिले सैनिक गठबन्धन त के, नेपालले आयोजनाको शुरक्षामा खटाउने सेना, प्रहरी, शुरक्षा गार्डको तलव भत्ता, तालिम, हतियार खरिद जस्ता कुनै काममा खर्च गर्न पाइदैन भन्छ । सैनिक गतिबिधिमा एक डलर खर्च गर्न नपाउने सर्त सम्झौतामा प्रष्ट लेखिएको छ । आयोजनाले क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन र १०० किमी पुर्व पस्चिम राजमार्ग बनाउने सम्झौता गरेको छ । आयोजनाको निम्ति जग्गा उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको काम हो भनेको बिषयलाइ आयोजनाले ओगट्ने जमिनमा अमेरिकाको अधिकार हुने भनिएको भन्दै ४ कक्षा पढ्ने बालकले समेत नगर्ने तर्क रावल गर्छन । यो राष्ट्रबाद कि राष्ट्रघात हो, सहज छ कुरा बुझ्न ।
४. कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक : सन १९६२ देखि भारतिय सेना नेपाली भुभागमा आएर बस्यो, २०१५ बाट वारी सडक निर्माण सुरु गर्यो – ५ पटक आफु मन्त्रि हुँदा त्यसै क्षेत्रका रावल चुँ बोलेनन, ओली सरकार आएपछी नेपाल भारत विच भएको सयौ ठाउको सिमा बिबाद समेत हल गर्ने गरी सम्युक्त टोली खटाएर अन्य ठाउको सीमा बिबाद अन्त्य भएको छ । कालापानी, लिपुलेक क्षेत्र बिबाद बाँकि रहेकोले सकिएका ठाउको सम्युक्त नक्सामा भारतले सही गरौ भन्दा नेपालले सम्पुर्ण बिबाद समाधान नगरी हस्ताक्षर नगर्ने भनेर रोकि राखेको छ । भीम रावल हिजो केही थाहा नभएको, ओली सरकार आएपछी बल्ल उनले थाहा पाए झै उग्र हर्कतमा उत्रिएका छन । सरकारले पछिल्लो पटक समेत भारतलाइ बिबाद समाधान गर्न पत्र लेखेर बैठकको मिति भारतका तर्फबाट तय गर्न पर्खिरहेको छ । कुटनितिक बिषयलाइ मुलुकको आन्तरिक बिषय झै आजै अहिले नै किन समाधान गरिनस भनेर कृतिम र झुठा कुरा फैलाएर राष्ट्रबादी कहलिदै छन । कालापानी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्न प्रम ओली र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसंग पाखुरा सुर्किनु पर्छ र? बिचित्र लाग्छ ।
बिषय उठाउनु मुख्य कुरा हैन, त्यस भित्रका नियत मुख्य कुरा हो । उग्र राष्ट्रबादको नारा लगाएरै हिटलर तानाशाह बनेको थियो, प्रचन्ड बाउराम पनि सुरुङ युद्ध गर्छु भन्थे ।
गुरू भट्टराईको व्यक्तिगत विचार हो